Source calankacom-) Xassan Dahir oo bixiyay Macluumaad ku saabsan Maamul Gobaleedyada Alshabaab siiya Dhaqaalaha kadib markii la sumeeyay. Jul 2, 2013 – jawaab Xassan Dahir Aweys oo u xiran Xukuumadda Somalia iyo Sirdoonka Britain iyo Maraykan, ayaa waxaa lagu soo waramaaya in Sirdoonka ay Sumeeyen kadib laga helay Macluumaad ku saabsan Halka Alshabaab laga maalgaliyo. Warar hoose oo ay heshay Shabakadda Soomaalidamaanta, ayaa sheegaya in Xassan Dahir oo la sumeeyay uu sheegay in Alshabaab inta badan hubka iyo sahayda looga soo gudbiyo Puntland,Kismaayo,Dhanka Dowladda, sida ay Xogtu nagu soo gaaray, iyadoona lagu soo qaado qaab ganacsi ah. Xassan oo la sumeeyay, ayaa waxa uu sheegay in Saraakiil ka tirsanaa Dowladii KMG ee Sheikh Shariif ay la shaqeyn jireen Alshabaab iyagoona inta badan Hubka usoo gudbin jiray Alshabaab halkaasina ka macaashi jiray, sida ay xogtu sheegtay. Dhanka kale, Xassan Dahir ayaa waxaa laga helay Macluumaad ah in Alshabaab ay inta badan Weerarada kasoo qaadan Dayniile, Kaaraan, Xararyaale, Gubta, Geed-jacey, Kaaraan, isagoona sheegay in wax waliba oo Qarax ah lagu farsameeyo Xaafadda Buula-xubey halkaasina laga qaado weerarada ismiidaaminta ah. Xassan Dahir Labadii maalin ee ugu horeysay wuu ka dhaga adeegaayay inuu bixiyo Macluumaad ku aadan Alshabaab, sida ay Xogtu sheegeyso balse Galabnimadii shalay wixii ka dambeeyay loo adeegsaday Daawooyinka Dambiilayaasha la siiyo oo Macluumaadka looga raadiyo iyo isaga oo loo adeegsaday Qalabka Korontadda, taasoo keentay inuu si mala awaal ah u sheego wixii Macluumaad ah ee uu qarinaayay. Xassan waxaa laga helay Xog ah Halka uu Xiligaani ku sugan yahay Hoggaamiyaha Alshabaab Axmed Godane iyo Afhayeenka Alshabaab Cali dheere, balse shabakadda ma aysan u suura galin inay hesho Macluumaadkaasi Xasaasiga ah. Ugu dambeyntii, Waxaa jira Macluumaad intaa ka badan oo uu Xassan Dahir sheegay balse aysan Shabakadda u suura galin inay wada hesho gabi ahaan Macluumaadka. | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders Source calankacom-) Xassan Dahir oo bixiyay Macluumaad ku saabsan Maamul Gobaleedyada Alshabaab siiya Dhaqaalaha kadib markii la sumeeyay. Jul 2, 2013 – jawaab Xassan Dahir Aweys oo u xiran Xukuumadda Somalia iyo Sirdoonka Britain iyo Maraykan, ayaa waxaa lagu soo waramaaya in Sirdoonka ay Sumeeyen kadib laga helay Macluumaad ku saabsan Halka Alshabaab laga maalgaliyo. Warar hoose oo ay heshay Shabakadda Soomaalidamaanta, ayaa sheegaya in Xassan Dahir oo la sumeeyay uu sheegay in Alshabaab inta badan hubka iyo sahayda looga soo gudbiyo Puntland,Kismaayo,Dhanka Dowladda, sida ay Xogtu nagu soo gaaray, iyadoona lagu soo qaado qaab ganacsi ah. Xassan oo la sumeeyay, ayaa waxa uu sheegay in Saraakiil ka tirsanaa Dowladii KMG ee Sheikh Shariif ay la shaqeyn jireen Alshabaab iyagoona inta badan Hubka usoo gudbin jiray Alshabaab halkaasina ka macaashi jiray, sida ay xogtu sheegtay. Dhanka kale, Xassan Dahir ayaa waxaa laga helay Macluumaad ah in Alshabaab ay inta badan Weerarada kasoo qaadan Dayniile, Kaaraan, Xararyaale, Gubta, Geed-jacey, Kaaraan, isagoona sheegay in wax waliba oo Qarax ah lagu farsameeyo Xaafadda Buula-xubey halkaasina laga qaado weerarada ismiidaaminta ah. Xassan Dahir Labadii maalin ee ugu horeysay wuu ka dhaga adeegaayay inuu bixiyo Macluumaad ku aadan Alshabaab, sida ay Xogtu sheegeyso balse Galabnimadii shalay wixii ka dambeeyay loo adeegsaday Daawooyinka Dambiilayaasha la siiyo oo Macluumaadka looga raadiyo iyo isaga oo loo adeegsaday Qalabka Korontadda, taasoo keentay inuu si mala awaal ah u sheego wixii Macluumaad ah ee uu qarinaayay. Xassan waxaa laga helay Xog ah Halka uu Xiligaani ku sugan yahay Hoggaamiyaha Alshabaab Axmed Godane iyo Afhayeenka Alshabaab Cali dheere, balse shabakadda ma aysan u suura galin inay hesho Macluumaadkaasi Xasaasiga ah. Ugu dambeyntii, Waxaa jira Macluumaad intaa ka badan oo uu Xassan Dahir sheegay balse aysan Shabakadda u suura galin inay wada hesho gabi ahaan Macluumaadka. – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
Source calankacom-) Xassan Dahir oo bixiyay Macluumaad ku saabsan Maamul Gobaleedyada Alshabaab siiya Dhaqaalaha kadib markii la sumeeyay. Jul 2, 2013 – jawaab Xassan Dahir Aweys oo u xiran Xukuumadda Somalia iyo Sirdoonka Britain iyo Maraykan, ayaa waxaa lagu soo waramaaya in Sirdoonka ay Sumeeyen kadib laga helay Macluumaad ku saabsan Halka Alshabaab laga maalgaliyo. Warar hoose oo ay heshay Shabakadda Soomaalidamaanta, ayaa sheegaya in Xassan Dahir oo la sumeeyay uu sheegay in Alshabaab inta badan hubka iyo sahayda looga soo gudbiyo Puntland,Kismaayo,Dhanka Dowladda, sida ay Xogtu nagu soo gaaray, iyadoona lagu soo qaado qaab ganacsi ah. Xassan oo la sumeeyay, ayaa waxa uu sheegay in Saraakiil ka tirsanaa Dowladii KMG ee Sheikh Shariif ay la shaqeyn jireen Alshabaab iyagoona inta badan Hubka usoo gudbin jiray Alshabaab halkaasina ka macaashi jiray, sida ay xogtu sheegtay. Dhanka kale, Xassan Dahir ayaa waxaa laga helay Macluumaad ah in Alshabaab ay inta badan Weerarada kasoo qaadan Dayniile, Kaaraan, Xararyaale, Gubta, Geed-jacey, Kaaraan, isagoona sheegay in wax waliba oo Qarax ah lagu farsameeyo Xaafadda Buula-xubey halkaasina laga qaado weerarada ismiidaaminta ah. Xassan Dahir Labadii maalin ee ugu horeysay wuu ka dhaga adeegaayay inuu bixiyo Macluumaad ku aadan Alshabaab, sida ay Xogtu sheegeyso balse Galabnimadii shalay wixii ka dambeeyay loo adeegsaday Daawooyinka Dambiilayaasha la siiyo oo Macluumaadka looga raadiyo iyo isaga oo loo adeegsaday Qalabka Korontadda, taasoo keentay inuu si mala awaal ah u sheego wixii Macluumaad ah ee uu qarinaayay. Xassan waxaa laga helay Xog ah Halka uu Xiligaani ku sugan yahay Hoggaamiyaha Alshabaab Axmed Godane iyo Afhayeenka Alshabaab Cali dheere, balse shabakadda ma aysan u suura galin inay hesho Macluumaadkaasi Xasaasiga ah. Ugu dambeyntii, Waxaa jira Macluumaad intaa ka badan oo uu Xassan Dahir sheegay balse aysan Shabakadda u suura galin inay wada hesho gabi ahaan Macluumaadka.
→ Xassan Dahir oo bixiyayMacluumaad ku saabsan MaamulGobaleedyada Alshabaab siiyaDhaqaalaha kadib markii la sumeeyay.Jul 2, 2013 – jawaabXassan Dahir Aweys oo u xiran XukuumaddaSomalia iyo Sirdoonka Britain iyo Maraykan, ayaawaxaa lagu soo waramaaya in Sirdoonka aySumeeyen kadib laga helay Macluumaad kusaabsan Halka Alshabaab laga maalgaliyo.Warar hoose oo ay heshay ShabakaddaSoomaalidamaanta, ayaa sheegaya in XassanDahir oo la sumeeyay uu sheegay in Alshabaabinta badan hubka iyo sahayda looga soo gudbiyoPuntland,Kismaayo,Dhanka Dowladda, sida ayXogtu nagu soo gaaray, iyadoona lagu sooqaado qaab ganacsi ah.Xassan oo la sumeeyay, ayaa waxa uu sheegayin Saraakiil ka tirsanaa Dowladii KMG ee SheikhShariif ay la shaqeyn jireen Alshabaab iyagoonainta badan Hubka usoo gudbin jiray Alshabaabhalkaasina ka macaashi jiray, sida ay xogtusheegtay.Dhanka kale, Xassan Dahir ayaa waxaa lagahelay Macluumaad ah in Alshabaab ay intabadan Weerarada kasoo qaadan Dayniile,Kaaraan, Xararyaale, Gubta, Geed-jacey, Kaaraan,isagoona sheegay in wax waliba oo Qarax ahlagu farsameeyo Xaafadda Buula-xubeyhalkaasina laga qaado weerarada ismiidaamintaah.Xassan Dahir Labadii maalin ee ugu horeysaywuu ka dhaga adeegaayay inuu bixiyoMacluumaad ku aadan Alshabaab, sida ay Xogtusheegeyso balse Galabnimadii shalay wixii kadambeeyay loo adeegsaday DaawooyinkaDambiilayaasha la siiyo oo Macluumaadka loogaraadiyo iyo isaga oo loo adeegsaday QalabkaKorontadda, taasoo keentay inuu si mala awaalah u sheego wixii Macluumaad ah ee uuqarinaayay.Xassan waxaa laga helay Xog ah Halka uuXiligaani ku sugan yahay HoggaamiyahaAlshabaab Axmed Godane iyo AfhayeenkaAlshabaab Cali dheere, balse shabakadda maaysan u suura galin inay heshoMacluumaadkaasi Xasaasiga ah.Ugu dambeyntii, Waxaa jira Macluumaad intaa kabadan oo uu Xassan Dahir sheegay balse aysanShabakadda u suura galin inay wada hesho gabiahaan Macluumaadka.
← Qaramada Midoobay oo shaacisay Musuqmaasuq ka jira Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo shaqsiyaadka ugu badan ee galay	Warbixin ay diyaarisay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in la lunsaday lacag gaareysa $12 milyan oo la sheegay in lagala baxay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ee ku yaalla Muqdisho, iyadoo warbixintu ay ku eedeysay guddoomiyaha Bangiga Dhexe, Cabdisalaan Cumar Hadliye, inuu ku lug leeyahay lunsashada lacagta. Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa xilka qabtay bishii January ee sanadkan, waxayna warbixinta ku eedeysay inuu isagu bixiyay go’aamada lagu saaray lacagta. Wakaaladda wararka ee Reuters oo Isniintii shalay aragtay warbixinta uu qoray guddiga dabagalka ee Qaramada Midoobay, ayaa qortay in 80 boqolkiiba lacagta laga saaray Bangiga Dhexe loo isticmaalay ujeeddooyin gaar ah. Hay’ad u xil-saarnayd mas’uuliyadda ammaanada oo ay maamusho shirkadda lagu magacaabo PricewaterhouseCoopers ayay warbixintu sheegtay inay noqotay mid magac u yaal ah oo aan xaqiijin karin sida loo maareeyo lacagta ay la baxaan mas’uuliyiinta sare ee dowladda Soomaaliya. “$16.9 milyan ayay hay’adda PWC u xawishay Bangiga Dhexe, $12 milyan oo ka mid ah lama garanayo halka ay ku baxday.” Xisaabaadka Bangiga Dhexe waxay muujinayaan in nin khasnaji ka ah wasaaradda maaliyadda, oo magaciisa lagu sheegay Ahir Axmed Jimcaale uu mas’uul ka yahay la bixitaanka lacagtii ugu badneyd. Warbixintu waxay sheegtay in ninkaas magaciisa lagula baxay lacag gaareysa $20.5 milyan sanadihii u dhaxeeyay 2010 iyo 2013, taas oo la siiyay shaqsiyaad gaar ah oo waraaqo ka sitay mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda. Shaqsi kale oo lagu magacaabo Kornayl Cabdiqaadir Macallin Nuur ayay warbixintu sheegtay inuu la baxay $4.7 milyan muddadii u dhaxeysay 2010 iyo 2013. Waa lacagtii labaad ee ugu badneyd ee la lunsaday sida ay sheegtay warbixinta, loomana hayo sharraxaad ku saabsan sida loo isticmaalay. Shirkadda PricewaterhouseCoopers, guddoomiyaha Bangiga Dhexe Cumar iyo howlgalka Qaramada ee Soomaaliya ilaa hadda kama aanay jawaabin codsi la rabay inay uga hadlan arrintan. Warbixintu waxay sheegtay in muddadii u dhaxeysay September, oo aheyd markii dowladda cusub ee Xasan Sheekh ay xilka qabatay, iyo April, in afar meelood saddex meel in lacagta Bangiga Dhexe ay ka saareen shaqsiyaad gaar ah. Hay’adda lacagta adduunka ee IMF ayaa aqoonsatay dowladda Soomaaliya bishii April, kaddib 22 sano, waxayna toddobaadkii hore siisay taageero farsamo iyo talo, oo ah tallaabadi ugu horreysay oo daynta looga cafinayo Soomaaliya. Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa si rasmi ah loo shaaciyaa sanad kasta bisha July.